Ukukhawuleza komlilo we-HyperX, sijonga kwakhona le mpuku yokudlala | Iindaba zeGajethi
UMiguel Hernandez | 01/04/2021 10:00 | Ukuhlaziywa ukuba 26/03/2021 23:35 | ngokubanzi, Reviews
Imida iyabaluleka njengePC ngokwayo xa isiza kukonwabela iiyure ezinde zemidlalo yevidiyo, yile nto kanye eyenzekayo HyperX, uphawu olwamkelweyo lokuhlangabezana neemfuno zabona badlali badlala kulo mba. Ngeli xesha sifuna ukukuzisa uvavanyo lwamva nje lwemveliso enxulumene nokudlala.
Sijonga ngokunzulu kwiHyperX Pulsefire Haste entsha, imouse yokudlala ethe ngqo eya kukuvumela ukuba ufumane uninzi kwiziphumo zakho. Olu hlobo lwempuku luye lwaba yimfashini phakathi kweengcali, ngaba kuyinyani ukuba banikezela ngeziphumo ezilungileyo?
IHyperX ivelisa ezi ntlobo zezincedisi ngokuqhubekeka okuhambelana, kule meko sinoyilo lwesiko ngokwesiqhelo, nangona inyani yokuba inezinto ezininzi ezenziwayo iyabetha ngenjongo yokunciphisa ubunzima kangangoko kunokwenzekaNgenxa yoko, sinobunzima ngaphandle kwekhebula le-59 yeegram kunye nentambo ye-80 gram iyonke. Ngoyilo olujikeleze ngokupheleleyo kwaye oluqhelekileyo, ineqhosha phezulu ukulungisa isantya sentshukumo, amaqhosha amabini emveli, ivili elihambelanayo kunye namaqhosha amabini kwindawo yesithupha. Este es el contenido del paquete: usetyenziso lweWindows kwi- Ivenkile yeWindows
Inayiloni HyperFlex Cable ye-USB
I-TTC yegolide enothuli olungenamanzi
Amaqhosha ewonke: zintandathu
Yenziwe ngeplastikhi emnyama, enobukhulu be 124.2 x 32.2 x 66.8 mm iyonke. Kufuneka iqatshelwe ukuba inokuba yintoni enye into, sinayo I-RGB ye-LED edityaniswe kule meko kwivili lempuku, Kwaye kukukhanya, olu hlobo lweenkcukacha lilinganiselwe kumgangatho ophezulu ngokuxhasa ukonwaba okukhulu kwesixhobo.
Ngokubhekisele kwisenzi, sinayo a IPixart PAW3335 ngesisombululo ukuya kuthi ga kwi-16.000 DPI, esinokuthi siqwalasele kuyo sisebenzisa iqhosha ukusuka 400/800/1600 ukuya kuthi ga kwi-3200 DPI. Oku kusinika isantya esipheleleyo se 450ips ukukhawulezisa okuphezulu kwe-40G. Oku kuhamba kunye nezitshixo zayo ezingena uthuli I-TTC Golden exhasa malunga ne-60 yezigidi zokucofa.
Ngokubhekisele kwimemori edityanisiweyo, ineprofayili enye kuphela, enokuqwalaselwa ngokusetyenziswa kweHyperX onokuzikhuphela kuyo LONTO. Isantya sokuvota I-1.000 Hz ngeHyperFlex USB Cable netekhnoloji ye-USB 2.0 yendabuko.
Kule meko, isinike imouse encinci, eziqhayisa ngokukhanya kwaye inyani injalo ngokuchanekileyo. Iza kamnandi kwaye ihlangabezana neempawu zobuchwephesha ezithenjisiweyo, ezichanekileyo zilungelelaniswe nexabiso lemali. Qaphela ukuba sifumana ixabiso lama-59,99 euros kwiindawo ezahlukeneyo zentengiso ezinje ngeAmazon.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » Ukukhawuleza komlilo we-HyperX, sijonga kwakhona le mpuku yokudlala